Ummanni Amboo bara TPLF olitti hidhaa fi ajjeechaan itti fufe. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsUmmanni Amboo bara TPLF olitti hidhaa fi ajjeechaan itti fufe.
Amboo !! Ummanni Amboo bara TPLF olitti hidhaa fi ajjeechaan itti fufe.
Koottu, egaa, erga diddee, gatii kee fudhattee deemta!
Kun milishaa WBO sakatta’uuf deemee, harka ol qabate!!
Nagaan ijoollee isa otuu guddifatee wayyaaf!!
Maaloo Milishaa kana hin miidhiinaa. Homaa hinbeeku. Qawweellee isa wannoo sana itti kennitee ergite OPDOn. Qoraan dhiifama Qawwee sana harkaa fuudgaati lafa qochisiisaa. Kun Qonnaaf tola. Kunoo halagaan akkasittiin wallalaa nama keenyaan xabatti
Hidhatarraan yaa hidhannoo sinaara ati hindhu natu dhufee silaalaa🅰️🅱️🅾️ Jajjabee Zoonii G/Galeessaa Ijoollee Jaal Sanyii ❤💚❤
Opdon Qabsaa’oota Amboo,Qeerroo fi Bakka bu’aa ABO God/Sh/Lixaa kan ta’an Jal Milkeessaa Hirkoo dabalatee Namoota heddu mana hidhaatti guraa jiru. Tibba kana Magaalaa Amboo ti Opdon deeggarsa dhaabdee mormiin Gama hundaan uummata irraa waan itti cimeef Kasaaraa Guddaa Abdii kutachuu irraa kan ka’e Qabsaa’oota dhugaa badii fi ragaa tokko malee mana hidhaatti guraa jiru.
Qeerroon Amboos bifa qinda’een mormii wal irraa Hin cinneen itti mudduun qabsoo Jiddutti laafe cimsuun galma qabsoo keenyaa gahuuf Qeerroon waliif galeera.
Ni dandeenya.Kabiinootaa fi Basaastota Opdo Biiroo ishiin jirtuu hunda keessaa Ni ariyanna.
Kan ummanni filateen Bakka Ni buufna.
#VOA Afaan Oromoo, Thank you!!
Yoo Oromoodha taate kana dhaggeeffadhuuti “Share’ godhi; iyyaa iyya daabrsaa; dandeessan waliif dirmadhaa!! Oromoon dhumeera!!
“Summiin barattoota Innaangoo irratti kaleessa raawwatame rakkoo hamaa uumaa jira. Amma kanneen itti cimee jiru gara Naqamteetti ergaa jiru. Warri fayyanii galanis deebisee dhukkubnaan Gimbiitti guuraa jiru. Iji ijoollee hedduu banamuu hin dandeenye. Maaloo Ogeessonni daa’imoota kanaaf haa birmataniiti nuuf iyyi. Ani amma Hospitaala Gimbii keessan jira. Gadda guddadha. Kanneen fooyyan jedhamaniyyuu summiin waan faalamaniif bulee miidhaa inni qabu baruun rakkisaadha. Barattoota irratti Shaakaluun maal jedhama?”
Breaking: Waraanni mootummaa manneen barnoota irratti summii biifuudhan barattoonni hedduun akka miidhaman maddeen nu gaabasaniiru,: https://t.co/5kw9hvUbfD
አብይ አህመድ ወለጋን እንደ ሀውዜን አድርጎታል ሌላው ኦሮሞ ፀጥ ብሎ ተኝቷል ይሄ ነው ግን ኦሮሞነት ምነው እነጅዋር ዛሬ ዝም አሉ !!!!
ሚሚ ጎበና pic.twitter.com/mb6BkWDMNB